सविता मृत्यु घटना प्रकरण : भिडियोबारे अदालतमा के दिइयो बयान ? | चितवन पोष्ट दैनिक
सविता मृत्यु घटना प्रकरण : भिडियोबारे अदालतमा के दिइयो बयान ?
भरतपुर । टिकटक र युट्युबमा भाइरल सविता भण्डारी (धिताल) मृत्यु घटना चासोको विषय बनेको छ । उनको मृत्युलाई यौन हिंसा गरी मर्न बाध्य बनाएको भनी आत्महत्या दुरूत्साहनअन्तर्गत चितवन अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । मुद्दा विचाराधीन छ । आरोपितहरु धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनीहरुविरूद्ध ५ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ ।
काठमाडौँ, कोटेश्वरकी सविता (२८ वर्ष) र चितवन भरतपुर महानगर–१९, बखानचोक घर भएका योगेन्द्र धिताल (३९ वर्ष)बीच ०७१ साल वैशाख ३ गते विवाह भएको थियो । विवाहपछि श्रीमान्श्रीमती नै विदेश गएका थिए । केही वर्षअघि फर्किए ।
उनीहरुको एक सन्तान (छोरा) छन् । अघिल्लो दिन विवाह वर्षगाँठ मनाएका सविता र रमेशको घरमा भोलिपल्ट दुःखद घटना भयो । वैशाख ४ गते दिनको ५ बजेतिर सविता आफ्नै कोठाको झ्यालमा रहेको ग्रीलमा सलको पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परिन् ।
भिडियोबारे ससुरा र छोराको जवाफ
खासमा सविताको ससुरा भनिएका रमेश धिताल (७२ वर्ष)ले भिडियोमा देखिएअनुसार उनलाई यौन हिंसा गर्न खोजेको पाइन्छ । तर, अदालतमा बयान दिँदा तिनै ससुराले भनेका छन्, ‘आँखामा औषधि हालेको हो, यौन हिंसा होइन ।’ बुबाको भनाइलाई थप समर्थन गर्दै सविताको श्रीमान् तथा रमेशको छोराले पनि सविताले बुबाको आँखामा औषधि हालेको र त्यो भिडियो सविताले नै खिचेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बुबाले यौन हिंसा हुने काम गर्नुभएको छैन, आँखामा औषधि हालिदिँदा भयो ।’
के छ बयानमा
आत्महत्या दुरूत्साहनसम्बन्धी घटनामा सविताको श्रीमान्, ससुरा र अमाजू मुछिएका छन् । उनीहरुमध्ये श्रीमान् योगेन्द्र धितालविरूद्ध सविताको माइतीतर्फका बुबा रामचन्द्र भण्डारीले वैशाख १२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा किटानी जाहेरी दिएका हुन् । सविताको मृत्युमा आफूहरुको कुनै भूमिका नरहेको तीनैजनाको बयान छ । उनीहरुका अनुसार सविताले नियमित डिप्रेसनको औषधि खान्थिन् र चितवन मेडिकल कलेजमा उनको नियमित स्वास्थ्य जाँचसमेत हुँदै आएको थियो ।
यौन हिंसाको आरोप लागेका ससुरा रमेशले बयानमा छोरीजस्तै गरी ममता दिई राखेको उल्लेख छ । ‘भिडियोमा देखिएको वृद्ध व्यक्ति म आफैँ हुँ, सो भिडियो मृतक बुहारीले मेरो आँखामा औषधि हालिदिँदाको अवस्थाको हो र निज आफैँले खिचेकी हुन्’, उनले भने ।
सामान्य विवाद भए पनि मृत्यु घटना हुनेसम्मको कुनै विवाद नभएको श्रीमान् रमेशको बयान छ । आत्महत्या दुरूत्साहनमा रमेशकी दिदी अर्थात् सविताकी अमाजू भावना धिताल (ढकाल)समेत संलग्न रहेको भनी जाहेरी परेको छ । भावना धिताल पनि विदेश गएकी थिइन् । उनी हाल नेपालमै छिन् । सुरूमा फरार भनिएकी उनी जेठ १९ गते चितवन अदालतमा उपस्थित भइन् । बयानको क्रममा भावनाले आफूमाथिको आरोप झूटो भएको बताइन् । उनले बयानमा भनेकी छन्, ‘बुहारी डिप्रेसनको बिरामी थिइन् ।’
आदेशमा के छ ?
अदालतमा सरकारी वकिलले अभियोगपत्रसहित मुद्दा टेकाएपछि दुई फरक मितिमा आरोपित ३ जनाविरूद्ध आदेश भएको छ । जेठ १४ गते भएको आदेशअनुसार श्रीमान् र ससुरालाई जनही १ लाख धरौटी माग भएको थियो । उनीहरु धरौटी राखेर तारेखमा छुटेका छन् । अमाजूलाई भने जेठ १९ गते २५ हजार धरौटी माग भएको र उनी पनि धरौटी राखेर छुटेको चितवन अदालतका श्रेष्तेदार ईश्वर आचार्यले बताए ।
ससुरा रमेशकुमार धिताल शिक्षण पेसाबाट निवृत्त रहेको र स्वास्थ्य कमजोर भई उठबस गर्नका लागि पनि अरुको सहारा चाहिने बताइएको छ ।
सविताको बुबाले डिप्रेसनको औषधि जबर्जस्ती खुवाएको र विवाहपछि श्रीमान्श्रीमती नै विदेश गएको, विदेशमा समेत रक्सी खाई झगडा गर्ने गरेको, दाइजो नल्याएको, शरीर मोटो भएको लाञ्छना लगाउने गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ को उपदफा १ बमोजिमको कसुर अपराध गरेको भनी अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अभियोग पुष्टि भएमा अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।